Waa sidee taranka farasku? ? Ogow! | Notti Fardaha
Carlos Garrido | | Taranka
Dunida dhexdeeda faraska waxaan ka helnaa dhinacyo badan iyo noocyo kaladuwan oo aad u xiiso gelin kara dhammaan kuwa jecel xayawaankan cajiibka ah. Farasku kaliya kuma koobna socodka, fuulitaanka, iwm, laakiin sidoo kale waxaa jira fursado kale sida tartamada isboortiga (tartanka ama fuulitaanka faraska), tartamada qaabkeeda loo qiimeeyo iyo wax aad u soo jiidasho leh: cidla ah.
Dad badan oo hiwaayad u ah ayaa jecel inay farac ka helaan fardahooda. Khibrad u leh habka uurka, dhalashada iyo daryeelka foosha yar yar. Laakiin, waa in la ogaadaa in tan Ma aha hawl fudud. Waa lagama maarmaan in la helo aqoon aad u tiro badan oo la helo aqoon taxane ah oo lagu dhaqmo si loo helo waayo-aragnimo waxtar weyn u leh, gaar ahaan haddii aan higsaneyno inaan ku sii socono taranka faraska illaa heer aan awoodno si aan u tababbarinno cowskeenna ama lo'geena.
Waa lagama maarmaan, had iyo jeer, in loo weecdo xirfadle ama qof si fiican noogala taliya arrimahan, si looga fogaado dhibaatooyin fara badan oo soo kordha. Si kastaba ha noqotee, hoosta waxaan isku dayi doonaa inaan kugu hagno adiga oo bixinaya taxane ah oo xiiso leh iyo macluumaad si looga dhigo hal-abuurnimadan fardaha taranka wax ka farxad badan.
1 Goorma ayay farduhu tarmaan?
2 Uurka fardo
3 Daryeelka xayawaanka
4 Marka la soo koobo, sidee farduhu isulamaan?
Goorma ayay farduhu tarmaan?
Xilliga ugu habboon sanadka dhalashada fardaha yaryar waa la primavera, sida ku dhacda noocyo kale oo badan oo xayawaan ah, gaar ahaan dhammaan kuwa ka tirsan kooxda naasleyda. Sababta ama sababta ayaa ah in waqtigan cunnadu inta badan aad u faro badan tahay oo xaaladaha cimiladu badanaa aan badnayn laakiin ay yihiin kuwo khafiif ah, oo saacadaha dharaartu door muhiim ah ka ciyaarayaan.
Iftiinka kordhay wuxuu si aad ah u kiciyaa waxa loogu yeero "Helitaanka xarumaha" ku yaal maskaxda kuwaas oo ah dambiilayaasha bilaabida soo saarista hormoonnada, oo ay ku jiraan kuwa galmada.
Khiyaano yar, oo ay kalkaaliyeyaasha kale ee xayawaanada kale ee guryaha ahi ay sidoo kale adeegsadaan, iyagoo adeegsanaya khabiiro ornithologists ah, ayaa ah ku bixi iftiin dabiici ah maqsinka ama meel taranta. Farsamadan ayaa sababi karta saacadda bayoolojiga ah ee fardaheenna inay bilaabaan sidaas awgeedna waannu horumarin karnaa xilliga taranka.
Bisaylka galmada ee sinnaantan ayaa caadi ahaan ka yimaada agagaarka saddex jir ah. Marar dhif ah, waxaa jiray kiisas ah in digaag ama digaag yar ay wax dhaliyeen siddeed iyo toban bilood oo keliya, laakiin waxaan ku adkaysanayaa inay tahay wax gaar ah oo aan badanaa dhicin.
Waqtiga ku habboon ee ay dhallaanka dhalayaan waa inta u dhexeysa bilaha Maajo iyo Juun.
Muddada uurka, sida caadiga ah, waxay ku saabsan tahay kow iyo toban bilood, qiyaastii 340 maalmood. Laakiin, sida waxyaabo kale oo badan, kani ma aha sharci xag-jir ah. Waxaa jira uur ku jira maareynta taas oo ay foorku si sax ah u horumartay oo ay dhalatay dhammaadka tobanka bilood ee ugu horreeya, oo u baahan taxaddar gaar ah oo taxaddar leh. Taas bedelkeeda, waxaa jira xaalado hawshani socotey illaa sanadka, badanaa marka faracoodu lab yahay.
Xaqiiqda xiisaha leh ayaa ah in sida caadiga ah dhalashada mareegaha ay badanaa dhacdo habeenkii. Gaarsiinta ayaa sheegay ha dhaafin wax ka badan shan iyo toban daqiiqo. In kasta oo ay tahay in la ogaado in haddii hooyadu la kulanto ama dareento nooc khatar ah, ay awood u leedahay inay carqaladeyso dhalmada.
Xilliga uurka waxaa lagama maarmaan ah in la qaado taxaddar badan. Waa muhiim in la yiraahdo horumarka dhalinyarada wuxuu ku dhacaa gudaha ilmo-galeenka seddexdii bilood ee ugu dambeysay uurka. Sidaa darteed, lixda bilood ee ugu horreysa uurka, marsooyinka waa la dabooli karaa iyada oo aan wax dhibaato ah jirin, laakiin laga bilaabo xilligan laga bilaabo waxay noqon kartaa khatar culus oo xitaa sababi karta geerida ilmaha yar.
Cuntadu had iyo jeer aad ayey muhiim u tahay, waana ka sii badan tahay inta lagu jiro uurka. Siinta maqaayaddeena cunno nafaqo leh oo kaladuwan, oo ay kujirto nafaqeynta protein, waa muhiim.
Faa'iido loogu talagalay dhammaan kuwa soo-saarayaasha ah ee xayawaankoodu aanu ku jirin hawada furan, laakiin ku sii jira xerooyinka iyo meelaha yaryar inta badan maalinta, waa jimicsi. Ku qaadashada lugo gaaban, iyo xitaa orod fudud, ilaa mareegteenna uurka leh waa dhaqan aad u wanaagsan.
Haddii aan dooneyno inay dawadeennu u koraan si xoog leh oo caafimaad leh, waxaa lagama maarmaan ah inaan helno taxane fikrado aasaasi ah oo ku saabsan dhaqankooda, caadooyinkooda quudinta, iwm.
Mid ka mid ah sawirada sida aadka ah noogu dhaca faras yar ayaa ah lugaha dhaadheer. Digaaga dhashay hadda wuxuu leeyahay addimo dhaadheer, oo u oggolaanaya istaag hal saac ka dib dhalashadaada, oo orod laba saacadood kadib daqiiqadaas.
Lugahan dhaadheer ayaa sidoo kale ka mamnuucaya in ay gaadhaan sankooda cawska ku yaal dhulka, taas oo tilmaamaysa, in deegaan dabiici ah, digaagdu ay quudiso oo keliya caanaha ay soo saartay hooyadood. Caano hodan ku ah borotiinno dardar geliya isla markaana hagaajiya koritaanka dhalinyarada. Intaas waxaa sii dheer, caanaha ugu horreeya ee eydu soo saarto ayaa la yiraahdaa "dambar", kaas oo leh tiro aad u badan oo unugyada difaaca jirka.
Nacasyada badiyaa waxay nuugaan oo quudiyaan XNUMX daqiiqo kasta, qiyaastii. Haddii aan ku aragno khaladaadka habdhaqankan, waxaa laga yaabaa in sababta oo ah foorku uusan awoodin inuu si sax ah u gaaro naasaha haweenta, ama laga yaabee caanaha cawdu inaysan tayo wanaagsan lahayn, taas oo keeneysa diidmada kubka.
Marka ay dawladu dhameyso nuujinta, waxaa lagugula talinayaa inaad keento quud tayo sare leh si aad uhesho wixii cilladaha kujira horumarinteeda. Waxaa lagugula talinayaa inaad siiso nooc ka mid ah waxyaabaha nafaqada leh, gaar ahaan nooca fiitamiinka (gaar ahaan fitamiinnada A, D iyo E).
El badhanka caloosha waa wax walwal badan ka qaba kuwa soosaara. Daryeelkaaga, dhammaan maalmaha dhalmada ka dib, waa mid aad muhiim u ah. Haddii ay caadi u muuqato, looma baahna in wax tallaabo ah la qaado oo aan ka ahayn in lagu nadiifiyo alaabta jeermiska disha. Laakiin haddii aan aragno inaysan xaaladdiisu wanaagsanayn, mararka qaarkoodna xitaa waa waddo looga baxsado kaadida, ha ka fikirin laba jeer oo waa inaad dhaqso ugu tagtaa dhakhtarka xoolaha. Haddii kale, khaladaadka dhimashada ayaa dhici kara.
In kasta oo uu dhalinyaro yahay, hadana fardaha yaryari waa xayawaan aad u firfircoon, markaa haddii aan ogaanno in dawadeena ay in badan waqtigiisa ku qaadato hurdo, waxaa laga yaabaa inuu yahay daciif ama jiran.
Taranka farasku wuxuu noqon karaa waayo aragnimo aad u qancisa oo abaal marin leh, inta aan ka cadeynayno waxyaabaha qaarkood ee naga caawinaya inta lagu jiro. Waxaan rajeyneynaa inaan caawimaad weyn helnay oo aan awoodnay inaan cadeynno shakiga qaarkood ee laga qabo mowduucaan.
Marka la soo koobo, sidee farduhu isulamaan?
Fardaha, heerka taranka wuxuu caadi ahaan ka bilaabmaa qaangaadhnimada, taas oo ku dhacda dheddigga da 'ahaan u dhexeeya 15 iyo 24 bilood, halka ragga ay badanaa ka muuqdaan da 'hore maadaama ay caadi ahaan ka soo dhex baxaan 14 iyo 18 bilood, Daqiiqadani aad ayey muhiim ugu tahay fardaha maaddaama geeddi-socodku uusan diiradda saarin kaliya isugeynta, laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan horumarka caafimaadka iyo waxqabadka xiga ee xayawaanka.
Laakiin hawshu aad bay u dhib badan tahay maaddaama taranka farshaxanimada, ee aan ku jirin abuurku ay jiraan heerar ay fardooleyda iyo maareysyadu fuliyaan oo ay lagama maarmaan tahay in lagu gaaro isku-tagga, maadaama markii hore waa inay jirtaa waqti shukaansi, halka ay haridu ku ciyaareyso halka labku xukumayo ilaa hal mar eygu si buuxda u muujinayo umuliskeeda waana waqtigaas in gogosha dhacdo.
Wareegga isdaba jooga ah ee mareegaha wuxuu kuxiranyahay sawir qaadashada, maadaama mareygu yahay xayawaan xilliyeedka polyestric, yeelashada wareegeeda billaha ah muddo dhan 21 maalmood, oo leh kuleylkeeda 5 maalmood oo naadir ah taas oo ay tahay inaan aad uga taxaddarno, haddii aan sugeyno soo saarista taranka fardaha, xitaa khubaradu waxay yiraahdaan waqtiga ugu wanaagsan ee labku fuulayo waa inta u dhexeysa 12ka illaa o 'saacad. 36 saacadood laga bilaabo bilowga kuleylka maadaama ay tahay daqiiqada markii diirku ugxansidayo sidaa darteed fursadaha lagu helo in ay foosku uur yeelato ayaa aad u badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Taranka » Waa sidee taranka farduhu?